Fahasimbana rano amin'ny iPhone: Torolàlana farany momba ny fanamboarana ny simba amin'ny rano - Iphone
iphone lamba lasa mainty fotsiny
tsy azoko atao ny mampirehitra ny ipad-ko
miandry fotoana mialoha ho an'ny activation iphone 6
Fahasimbana rano amin'ny iPhone: Torolàlana farany momba ny fanamboarana ny simba amin'ny rano
Ny fandraisana ny dingana voalohany mety dia ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana ho an'ny iPhone misy fahasimban'ny rano. Mampalahelo fa betsaka ny fampahalalana diso amin'ny Internet momba ny inona tena miasa raha ny amin'ny famonjena ny iPhone simba simika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava izahay inona no mahatonga ny fahasimban'ny rano iPhone ary asehoy anao ny fomba hijerena azy . Hiresaka momba izany isika fambara mahazatra ny fahasimban'ny rano , inona no hatao avy hatrany aorian'ny fandatsahana iPhone anaty rano , ary ny fomba hanapahana hevitra raha hanamboatra iPhone simba-drano na hividy iray vaovao .
Mitranga ny fahasimban'ny rano rehefa tsy ampoizinao izany
Manao ahoana ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone?
Fambara an'ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone
Ahoana no hitrangan'ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone?
Vonjy taitra! Narotsako anaty rano fotsiny ny iPhone-ko. Inona no tokony hataoko?
Inona no hatao rehefa misy rano simba ny iPhone
Izay tsy tokony hataonao: angano manimba rano
Mety hamboarina ve ny fahasimban'ny rano iPhone?
Tokony hamboariko ve ny iPhone sa hividy vaovao?
Safidy fanamboarana fanimbana rano amin'ny iPhone
Afaka mivarotra iPhone simba amin'ny rano ve aho?
Raha nandatsaka ny iPhone-nao fotsiny tao anaty rano ianao ary mila fanampiana eo noho eo dia mitsambikina mankany Fizarana vonjy taitra hianarana izay tokony hatao rehefa tratry ny ranoka ny iPhone.
Nandritra ny fotoanako tao amin'ny Genius Bar, fantatro fa ny fahasimban'ny rano dia tsy hoe rehefa latsaka ao amin'ny trano fidiovana sy dobo ny iPhones. Mitranga izany any amin'ny gym, na filalaovana golf, na fitsangatsangana. Ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone dia mety hitranga na aiza na aiza. Ny indray mitete tokana dia mety hanimba ao anaty iPhone.
Ny iPhone rehetra hatramin'ny 7 dia navoaka ho tsy mahazaka rano, saingy tsy tokony hafangaro amin'ny tsy tantera-drano ity. Hiditra bebe kokoa amin'ny laharana IP sy ny fahasamihafana misy eo amin'ny tantera-drano sy ny rano isika aorian'ity lahatsoratra ity.
Raha fintinina (hisy ny puns) dia misy ny fahasimban'ny rano rehefa mifampikasoka amin'ny fitaovana elektronika mora tohina amin'ny rano ny rano na rano hafa. Na dia mora mora tohina amin'ny rano aza ny iPhones vaovao kokoa noho ny maodely antitra, ranon-javatra kely mitete no ilaina mba hanimba ny iPhone tsy azo amboarina.
Ny tombo-kase tsy mahazaka rano amin'ny iPhones vaovao dia mora azo amin'ny akanjo sy rovitra toy ny sisa amin'ny telefaona. Natao hanoherana ny rano izy io, fa tsy ny ranoka, menaka ary gels maro karazana izay ampiasain'ny maro amintsika isan'andro.
Ny fahasimban'ny rano dia mety ho miharihary na tsy hita. Indraindray dia miseho ho toy ny bubble kely ao ambanin'ny efijery na ny harafesina ary ny fiovan'ny toetr'andro ao anatin'ny seranan-tsambo misy azy. Na izany aza, matetika ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone dia tsy toy ny zavatra - farafaharatsiny avy any ivelany.
Ahoana ny fomba hijerena fahasimbana amin'ny rano amin'ny iPhone
Ny fomba tsara indrindra hijerena ny fahasimban'ny rano amin'ny iPhone dia ny fijerena ny mari-pamantarana ny rano, na ny LCI. Amin'ny iPhones vaovao, ny LCI dia miorina amin'ny toerana mitovy amin'ilay karatra SIM. Amin'ny maodely taloha an'ny iPhone (4s sy ny taloha), dia hahita LCI ao amin'ny jack headphone ianao, port port, na izy roa.
Eto no ahitanao ny mari-pamantarana fifandraisana amin'ny rano isaky ny iPhone:
iPhone 12/12 Mini SIM Card Slot
iPhone 4s Jack headphone sy seranan-tsambo
Iphone 4 Jack headphone sy seranan-tsambo
iPhone 3GS Jack headphone sy seranan-tsambo
iPhone 3G Jack headphone sy seranan-tsambo
iPhone Jack finday
Ahoana ny fomba hijerena ny LCI ao anatin'ilay slot SIM Card
Raha te hijery ny LCI amin'ny iPhone vaovao ianao dia ampiasao paperclip hivoahana ny fitoeran-tsaka SIM, izay hita eo ambanin'ny bokotra an-daniny (ny bokotra herinaratra) eo amin'ny ilany ankavanan'ny iPhone misy anao. Apetaho ao anaty loaka kely ilay clip eo. Mety mila tsindrio miaraka amin'ny hery kely ianao mba hamoahana ny fitoeran-tsolika SIM.
Fanamarihana: Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny ivelan'ny iPhone dia maina tanteraka alohan'ny hanesoranao ny fitoeran-tsaka SIM. Raha nandatsaka ny iPhone fotsiny ianao tao anaty ranoka ary mbola lena dia mandosira mankany amin'ny faritra misy anay momba izay tokony hatao voalohany raha latsaka anaty rano ny iPhone-nao.
Avy eo, esory ny dabilio SIM sy ny karatra SIM, ary tazomy ny iPhone nalahatra ambany ny efijery. Avy amin'ity zoro ity dia ampiasao jiro fanamoriana hijerena ny slot SIM card ary zahao ny LCI. Araka ny hodinihintsika avy eo, tsara kokoa ny mamela ny tarehy iPhone lena midina amin'ny faritra fisaka toy izay ny manatrika ambony.
Ahoana ny fomba hijerena LCI ao anaty Jack Headphone na seranan-tsambo
Mora kokoa ny mahita ireo LCI amin'ny iPhones taloha. Mamirapiratra jiro ao anaty kapila findainao iPhone na seranan-tsambo, arakaraka ny maodely anananao.
Ahoana ny endrik'ilay LCI?
Ny habe sy ny endrika LCI an'ny iPhone dia miovaova arakaraka ny maodely mankany amin'ny maodely, saingy mazàna dia tsara ny milaza raha 'tratra' ny LCI, araka ny voalazantsika tao amin'ny Genius Bar. Mitadiava tsipika kely na teboka ao anaty ny sisin'ny slot karatra SIM, eo amin'ny farany ambanin'ny jack headphone, na eo afovoan'ny mpampitohy dock (port port) amin'ireo iPhones taloha.
Inona no hitranga raha mena ny LCI-ko?
LCI mena dia manondro fa nifandray tamina ranon-javatra ny iPhone, ary indrisy, midika izany fa tsy maintsy mandoa vola ianao. Ianao dia handoa kely kokoa raha manana AppleCare + na fiantohana mpitatitra ianao raha tsy hoe tsy manana fandrakofana mihitsy.
Hiditra amin'ny vidiny isika ary hanapa-kevitra raha hanamboatra na hanolo iPhone simba rano etsy ambany. Fa aza manary toky. Tsy hoe rehefa vakiana ny LCI dia tsy midika hoe tsy ho velona intsony ny iPhone.
Inona no tokony hataoko raha mavokely ny LCI?
Mampalahelo fa mavo mena fotsiny ny mavokely. Na mena mena na mena mavomavo ny LCI, ny iPhone dia misy karazana simba simba ary tsy hosaronan'ny fiantohana.
Inona no tokony hataoko raha mavo ny LCI?
Na dia tsy mitranga matetika loatra aza izany dia aza gaga raha toa mavo ny LCI-nao. Ny vaovao tsara dia ny mavo tsy mena, midika izany fa tsy nopotehin'ny rano ny iPhone-nao.
Ny akora sasany (gunk, loto, lint sns ...) dia mety nanadio ny LCI an'ny iPhone anao. Mamporisika anao izahay ny manandrana manadio ny slot misy ny karatra SIM, ny headphone na ny port famandrihana amin'ny alàlan'ny borosy anti-static na borosy nify vaovao.
Raha mijanona mavo ny LCI dia tsy maninona ny mitondra ny iPhone ao amin'ny Apple Store! Na izany aza, raha tsy misy tsy mety amin'ny iPhone-nao dia tsy dia misy zavatra tokony hataon'ny teknolojia Apple.
Ho voasarona am-piandohana ve ny iPhone raha mbola fotsy ny LCI?
Raha fotsy na volafotsy ny LCI dia mety tsy misy ifandraisany amin'ny rano ilay olana iainan'ny iPhone. Raha napetrakao tao anaty pisinina ny iPhone alohan'ny nijanonany dia mety izany. Ny vaovao tsara dia ny hoe raha tsy afaka manaporofo ny iPhone fa simba ny rano ny iPhone dia mety mbola mitombina ihany ny fiantohana anao.
Na izany aza, ny LCI tsy mena dia tsy midika fa handrakotra ny iPhone ao anatin'ny fiantohana i Apple. Raha misy porofo misy ranoka na harafesina ao anaty iPhone, dia mety handà ny fandrakofana fiantohana ny Apple techs - na dia mbola fotsy aza ny LCI.
Aza mahazo hevitra mampihomehy…
Betsaka ny olona mahita LCI mena sy mikoropaka. Ny olona sasany manandrana mampiasa «whiteout» handrakofana ny LCI, ary ny sasany manala azy amin'ny tweezers. Aza atao izany! Misy antony roa tsy tokony hanandrana hanambaka:
Misy vintana lehibe hiteraka fahasimbana bebe kokoa amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny LCI.
Ireo teknolojia Apple dia mahita LCI isan'andro, isan'andro. Mora be ny milaza raha tsy misy LCI. Raha LCI no nisy nanodinkodina azy, ny iPhone dia mivoaka amin'ny fiantohana tsy misy fiantohana mankany amin'ny maha-voamarina ny fiantohana. Ny telefaona vaovao amin'ny vidin'ny antsinjarany feno dia mitentina dolara an-jatony mihoatra ny fanoloana tsy misy fiantohana ao amin'ny Genius Bar.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny 'Out of Warranty' sy ny 'Voided Warranty'?
Raha mitondra iPhone simba-rano any amin'ny Apple Store ianao dia mety holazaina aminao fa 'tsy misy fiantohana.' Ianao dia handoa kely kokoa hanoloana ny iPhone raha manana AppleCare +, fa na dia tsy manao izany aza ianao dia manolo ny iPhone tsy misy fiantohana dia mora vidy kokoa noho ny mividy vaovao.
Raha 'voided' ny fiantohana ny iPhone dia ratsy izany. IPhone iray manana fiantohana voided dia nolavin'i Apple. Tsy hanamboatra izany ao amin'ny Bar Genius ry zareo. Ny safidinao tokana dia ny mividy iPhone vaovao amin'ny vidiny feno.
Amin'ny ankapobeny, ny fomba tokana hanafoanana ny fiantohana ny iPhone dia ny manelingelina azy. Raha esorinao ny LCI dia foanana ny fiantohana. Raha manavaka azy ianao ka very visy dia esorina ilay antoka.
Fa na dia mamotika azy tsy nahy aza ianao, na mandatsaka azy ao anaty farihy, na mihazakazaka miaraka amin'ny fiaranao (hitako ireo rehetra ireo), dia tsy nanao zavatra tsy tokony hataonao ianao. (Farafaharatsiny, araka ny Apple.) Amin'ireo tranga ireo dia handoa vola amin'ny fanoloana na fanamboarana 'ivelan'ny fiantohana' ianao.
Ny fahasimban'ny rano dia mety miteraka olana isan-karazany amin'ny iPhone. Raha vao miditra ao ny ranoka dia sarotra ny mahafantatra hoe aiza no hiparitahany na karazana fahasimbana hitranga. Etsy ambany, nitanisa ireo soritr'aretina mahazatra indrindra amin'ny fahasimban'ny rano iPhone izahay.
Raha miha-mafana ny iPhone-nao
Ny bateria lithium-ion simba amin'ny rano dia mety mahazo mafana be. Na dia tsy dia fahita firy aza (indrindra ho an'ny iPhone), ny bateria lithium ion dia mety ho may rehefa simba. Ny Apple Store rehetra dia manana fiarovana amin'ny afo ao amin'ny Genius Room. Tsy mila nampiasa azy mihitsy aho, fa mitandrema tsara raha mahatsapa ny anao ianao iPhone manomboka hafanana mafana kokoa noho ny mahazatra.
Raha tsy misy feo amin'ny iPhone-nao
Rehefa miditra ao anaty iPhone ny rano ka miteraka fahasimbana, mety tsy mandeha tsara ny mpandahateny ao aminy ary manakorontana ny fahafahany mitendry feo. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahaizanao mihaino mozika izany, maheno ny feon-telefaona rehefa misy miantso, na miantso anao amin'ny alàlan'ny telefaona fitenenana.
Rehefa manomboka etona ny rano avy ao anaty iPhone dia mety ho velona indray ireo mpandahateny. Raha toa mihetsiketsika izy ireo na mihaosotra amin'ny voalohany, dia mety hihatsara ny kalitaon'ny feo rehefa mandeha ny fotoana - na mety tsia.
Tsy azonay antoka fa hanampy izany, fa ny Apple Watches vaovao kosa dia mampiasa ny mpandahateny anatiny handroahana ny rano rehefa tafalentika. Mety ho an'ny iPhone ve ity? Tsy azontsika antoka, fa raha ny mpandahateny manao feo mihitsy, dia tsy mety handratra ny hamoaka ny feony ary hanandrana.
Raha tsy mamaly ny iPhone-nao
Ny iray amin'ireo olana fahita indrindra sy mahasosotra indrindra amin'ny iPhone dia mitranga rehefa izany tsy handoa vola . Raha miditra ao amin'ny seranan-tsambo Fahazavana an'ny iPhone (seranan-tsambo) ianao, dia mety hiteraka korontana ary hanakana ny iPhone tsy ho afaka mi-charge mihitsy.
Andramo ny famandrihana ny iPhone amin'ny tariby maro sy charger maro alohan'ny hahatongavan'ity famaranana ity. Na izany aza, raha mena ny LCI ary tsy miakatra ny iPhone dia mety simba simba ny rano.
Raha nanandrana nampiasa vary ianao mba hahamaina ny iPhone alohan'ny hamakianao ity lahatsoratra ity (izay tsy amporisihanay) dia makà jiro jiro ary jereo ao anatin'ny seranan-tsambo iray. Imbetsaka aho no nahita voam-bary niraikitra tao. Aza manandrana manentsina tariby tariby ao anatin'ny port-tselatra raha tsy miditra mora izany. Fa kosa, ampiasao borosy nify mbola tsy nampiasainao hatrizay mba hamafana moramora ny fako.
Rehefa tsy afaka nesorina ny vary raha tsy nanimba ny elektronika dia voatery soloina telefaona iray izay mety ho velona indray. Ny namana iray izay nanana io olana io dia nindrana fitaovana fanaovana sary sokitra tamina sakaizany mba hanala ny voam-bary, ary nandaitra! Tsy fahazoan-dàlana hampiasa vy na inona na inona izahay, na izany aza, afa-tsy ho vahaolana farany.
Raha tsy mamantatra ny karatra SIM ny iPhone-nao
ny Karatra SIM no mitahiry ny angon-drakitra ao amin'ny iPhone anao izay manampy anao hitatitra azy ankoatr'ireo telefaona hafa ao amin'ny tambajotrany. Ny fampahalalana toy ny lakilen'ny fanomezan-dàlan'ny iPhoneo dia voatahiry ao amin'ny karatra SIM. Ireo lakile ireo dia mamela ny iPhone hiditra amin'ny minitra, hafatra ary data momba ny drafitry ny findainao.
Mety tsy afaka mifandray amin'ny tamba-jotra misy anao ny iPhone-nao raha nanimba ny karatra SIM na ny fantsom-pifandraisana SIM ny ranoka. Famantarana iray fa ny karatra SIM na ny dabanao SIM dia simba tamin'ny alàlan'ny fifandraisan-dronono dia ny hoe 'Tsisy SIM' eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny fisehoan'ny iPhone anao.
Raha azonao atao ny manilika ny mety hisian'ny rindrambaiko na ny olana mifandraika amin'ny mpitatitra izay miteraka ny anao iPhone hiteny hoe tsia SIM , mety mila soloinao ny karatra SIM na ny lohan'ny karatra SIM.
Raha tsy misy serivisy ny iPhone-nao
Rehefa misy fiatraikany amin'ny antena an'ny iPhone ny fahasimban'ny rano dia tsy hisy serivisy na serivisy tena mahantra. Na izany na tsy izany, ny iPhone dia tsy iPhone raha tsy afaka miantso telefaona ianao. Ny lahatsoratray dia afaka manampy anao hamaha olana mahantra na tsy misy serivisy amin'ny iPhone.
Raha mirongatra eo amin'ny iPhone ny Apple Logo
Famantarana iray fa manana fahasimbana amin'ny rano be ny iPhone-nao dia raha mipetaka amin'ny sary famantarana Apple izy. Rehefa mitranga dia azo atao ny anao iPhone dia tafahitsoka ao anaty loop indray .
Miezaha mamerina mamerina mafy ny iPhone mba hahitanao raha afaka manamboatra ilay olana ianao. Ity misy fomba famerenana mafy ny iPhone, arakaraka ny maodely anananao:
Ahoana ny fomba hamerenana mafy ny iPhone 6s sy ireo maodely taloha
Tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra Home sy ny bokotra herinaratra mandra-pahatonga mainty ny efijery ary hiseho ny sary famantarana Apple. Azonao atao ny mamoaka ny bokotra roa rehefa mahita ny sary famantarana Apple amin'ny fampisehoana ny iPhone-nao.
Ahoana ny fomba hamerenana mafy ny iPhone 7
Tsindrio ary tazomy ny bokotra midina sy ny bokotra herinaratra miaraka amin'izay mandra-pisehon'ny Apple logo eo amin'ny efijery an'ny iPhoneo. Afaho ny bokotra roa raha vantany vao miseho ny Apple logo.
Ahoana ny fomba famerenana mafy ny modely iPhone 8 sy vaovao
Tsindrio haingana ary afaho ny bokotra miakatra, avy eo tsindrio haingana ary alefaso ny bokotra ambany, avy eo tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny fampisehoana. Mety tsy maintsy mitazona ny bokotra amin'ny iPhone ianao mandritra ny 25-30 segondra, ka mahareta ary aza milavo lefona haingana!
Raha mijanona eo amin'ny efijery ny Apple Logo
Rehefa mandrehitra ny iPhone-nao ianao dia manontany ny singa rehetra hoe: “Ao ve ianao? Ao ve ianao?' Mety miraikitra amin'ny logo Apple ny iPhone anao raha iray amin'ireo singa ireo no tsy mamaly.
Raha ny iPhone-nao raikitra amin'ny sary famantarana Apple mandritra ny minitra maromaro dia andramo ny famerenanana mafy amin'ny alàlan'ny fomba nofariparihinay tamin'ny soritr'aretina teo aloha.
Raha tsy mandeha ny fakantsarinao iPhone
ny Fakan-tsary iPhone mety hijanona tsy miasa tanteraka raha mifandray amin'ny fakan-tsary ny ranoka. Na dia miasa aza ny fakantsary, dia mahazatra tokoa ny maka iPhone manimba rano sary manjavozavo . Mitranga izany rehefa voasakan'ny rano ny solomaso na ny sisa tavela rehefa lasa etona izy.
Misy ny vintana fa raha avelanao irery mandritra ny fotoana fohy ny iPhone-nao dia mety hiasa tanteraka indray ny fakantsary. Raha mbola manjavozavo ny sarinao afaka andro vitsivitsy, dia mety mila manamboatra ny fakantsarinao ianao.
tadiavo amin'ny findaiko ny findaiko
Raha tsy manana herinaratra ny iPhoneo sa tsy mirehitra
Matetika ny fahasimban'ny rano no miteraka olana goavana eo amin'ny fitaovana sakano tsy hihodina ny iPhone-nao ary miasa mihitsy.
Ny fahasimban'ny rano dia mety hanelingelina ny famatsiana herinaratra an'ny iPhone na ny fifandraisan'ny batterinao iPhone amin'ny tabilao lojika. Ny seranan-tsambo Fahazavana any ambanin'ny iPhone dia mora tohina amin'ny rano ihany koa. Tsy misy fidirana amin'ny fahefana, ny Tsy handoa vola ny iPhone , ary tsy hirehitra izany.
“Nitranga tamin'ny iPhone-ko 4. Natsofoko tao anaty dobo filomanosana madiodio nandritra ny 15 segondra izany, ary tsy niverina intsony izy io. Tsy maintsy nampiasa telefaona iray nandritra ny andro fahavaratra aho. ”
Mety hanimba koa ny rano misy tsipika mitsangana miseho amin'ny fampisehoana ny iPhone . Ny tsipika mitsangana amin'ny efijery iPhone mazàna dia manondro fa nanjary somary malalaka ny efijery ary nesorina tsy ho ao anaty tabilao lojika ny tariby LCD.
Ny rano niditra tao amin'ny iPhoneo dia mety nanala ny fampisehoana, nanimba ny tariby LCD, na nanimba ny tabilao lojika.
Raha mikatona ny jiro findayo iPhone
Aza gaga raha toa ka 'mikatona' ny jiron'ny iPhone rehefa avy tratry ny rano. Fomba tsotra hanandramana sy hamahana ity olana ity ny fanaovana reset mafy, izay hanery ny iPhone hamonoana ary hiverina. Matetika, ity dia hahazo an-tsakany sy an-davany ny singa jiro ao amin'ny iPhone 'unstuck', mihevitra fa tsy misy fahasimbana lehibe amin'ny rano.
Raha miasa ny zavatra hafa rehetra, na raha tsy te-hanajamba ny namanao ianao, ny sombin-kasety elektrika mainty dia mety ho 'fanamboarana' vonjimaika mahomby.
Raha mieritreritra ny telefaoninao ny iPhone dia tafiditra
Mety hamaky diso ny iPhone-nao fa ny headphone dia ampidirina ao anaty jack headphone na port Lightning raha toa ka niditra tao amin'ny iray amin'ireo vavahady ireo ny rano. Rehefa mitranga izany dia Mety tafahitsoka ao anaty maody finday ny iPhone . Ny fisian'ny ranon-javatra dia mety hamitaka ny iPhone anao amin'ny fieritreretana fa ny headphone dia tafiditra ao na dia tsy izany aza.
Olana iraisan'ny olona iray hafa rehefa tonga tao amin'ny Apple Store izy ireo Ho mainty ny efijery iPhone , fa ny zavatra hafa rehetra kosa niasa ara-dalàna. Mbola maheno tabataba avy amin'ny mpandahateny aza izy ireo!
Rehefa mitranga izany dia mazàna midika izany fa nesorina ny tariby LCD, nahatonga ny efijery ho mainty tanteraka. Azonao atao ny manandrana mamerina amin'ny laoniny ny iPhone, fa raha endasina ny tariby LCD dia tsy hahavaha ny olana izany.
IPhones mahatohitra rano dia mbola mora tohina amin'ny fanimbana rano - misy sakana fiarovana fotsiny izay tokony hitazona ny rano hivoaka. Io sakana io sy ny fahaizany manohitra ranon-javatra dia mety hiharatsy rehefa mandeha ny fotoana, ka mahatonga ny iPhone tsy ho voaro amin'ny fifandraisan'ny rano.
Ilaina ihany koa ny mahafantatra fa ny iPhones mahazaka rano dia tsy natao hanoherana ny rano hafa toy ny savony sy menaka fanosotra. Ity no antony lehibe indrindra antony tsy hanoloran-tenanay hitondra ny iPhone miaraka aminao ao an-trano fidiovana rehefa mandro na mandro ianao.
Etsy ambany, hiresaka karazana fahasimbana ranon-javatra maro samihafa izahay sy ny tranga sasany mety hiteraka fahasimban'ny rano iPhone.
Fahasimban'ny rano amin'ny etona
Mino izany na tsia, ny iPhone-nao dia mety hahazo fahasimban'ny rano amin'ny etona, izay henontsika fa misy ifandraisany amin'ny rano. (Sangisangy.) Mamporisika ny Apple tsy hampiasa ny iPhoneo amin'ny toerana toy ny sauna na ny tontolo iainana misy toetr'andro tena mando.
Ny Steam dia afaka mandady amin'ny lalana mankany amin'ny iPhone sy mihaona rehefa tafiditra ao anatiny. Rehefa mirehitra ny etona, afaka miparitaka manerana ny anatiny amin'ny iPhone ny rano.
Mety hanimba ny rano amin'ny iPhone ve ny orana?
Eny, ny orana, endrika rano hafa, dia mety hiteraka fahasimban'ny rano iPhone. Na dia iPhone sy tsy mahazaka rano aza ny iPhone isaky ny iPhone 7, na ny rano kely indrindra aza dia mety hiteraka fahasimban'ny rano. Raha tsy lavorary ny iPhone, dia mamporisika anao izahay mba tsy hampiasa ny iPhone amin'ny toetr'andro orana. Afaka miditra amin'ny seranana ny ranonorana ary miteraka fahasimbana betsaka.
Mila mitandrina ihany koa ianao amin'ny fampiasana headphone tariby amin'ny andro orana, indrindra raha manana iPhone antitra ianao. Ny rano dia afaka mampidina ny tariby ao amin'ny fakan-tsarinao mankany amin'ny jack headphone na seranan-tsambo Lightning an'ny iPhone anao ary hiteraka fahasimbana indray mandeha ao anatiny.
Fahasimban'ny rano amin'ny hatsembohana gym
Tandindomin-doza mety hitranga amin'ny rano ny iPhone raha mampiasa headphone tariby amin'ny gym ianao. Raha mampiasa headphone misy tariby ianao, dia afaka mihazakazaka ny tariby ny hatsembohana ary miditra amin'ny jack headphone na port famandrihana. Mba hialana tanteraka amin'ity olana ity dia makà headphone Bluetooth roa. Tsy misy tariby, tsy misy olana!
Mety hanimba ny iPhone-nao ve ny rano sira?
IPhones vaovao dia mahatohitra rano, fa tsy mahatohitra rano. Ny rano masira sy ny fandrahonana fanampiny izay tsy ataon'ny rano mahazatra - harafesina.
Ny rano masira dia afaka manimba ny singa anatiny ao amin'ny fitaovanao, izay manampy sakana hafa eo ambonin'ny fahasimban'ny rano mety hitranga. Sarotra izaitsizy ny manadio na manamboatra ampahany tsy mety simba amin'ny iPhone. Mety tsy maintsy soloinao ireo singa maloto, na soloinao ny telefaoninao manontolo.
Ahoana no hitrangan'ny fahasimban'ny rano haingana?
Ho gaga ianao amin'ny habetsahan'ny rano mahazo ao anaty iPhone, na dia rehefa rendrika kely fotsiny aza. Ireo mpanjifa ao amin'ny Genius Bar matetika dia tsy nahafantatra ny antony nijanonan'ny iPhone tampoka tampoka - na hoy izy ireo. Alao sary an-tsaina ny hatairan'izy ireo rehefa nasehoko azy ireo ny pisinin-drano tao anatin'ny iPhone taorian'ny nanokafako azy!
Fa nieritreritra aho fa tsy misy rano ny iPhone-ko!
Ny telefaona fanaovana dokam-barotra ho fanoherana ny rano dia paikady mahomby tokoa, satria mampino ny olona fa tsy tantera-drano izy ireo. Saingy tsy izy ireo.
Ny fanoherana rano ny iPhones dia nomen'ny Ingress Progression, izay antsoina hoe an Naoty IP . Ity naoty ity dia milaza amin'ny mpanjifa tsara ny toetran'ny rano sy ny vovoka mahazaka ny findainy, miaraka amin'ny famaritana samihafa ho an'ny isa tsirairay.
iPhones alohan'ny 6s dia tsy nomena naoty. ny iPhone 7, 8, X, XR, ary SE 2 dia IP67 . Midika izany fa mahazaka vovoka sy mahatohitra rano ireto finday ireto rehefa milentika hatramin'ny 1 metatra anaty rano na latsaka.
Ny iPhone vaovao rehetra hatramin'ny iPhone XS (tsy misy iPhone SE 2) dia nomena isa IP68. Ny sasany natao hanoherana rano rehefa tototry ny rano tsy lalim-paka amin'ny 2 metatra hatramin'ny 30 minitra. Ny hafa, toa ny iPhone 12 Pro, dia mahazaka rano rehefa lentika hatramin'ny enina metatra!
Apple koa dia nilaza fa IP68 iPhones dia afaka mahazaka raraka avy amin'ny zava-pisotro mahazatra ao an-trano toy ny labiera, kafe, ranom-boankazo, soda ary dite.
Indray mandeha indray, Apple dia tsy manarona fahasimban'ny rano ho an'ny iPhones, noho izany dia tsy mamporisika anao hikajiana ireo fenitra ireo samirery ianao!
Fanoherana ny vovoka
iPhone 6s & teo aloha Tsy naoty N / A N / A
iPhone 7 IP67 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 1 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone 8 IP67 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 1 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone X IP67 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 1 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone XR IP67 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 1 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone SE 2 IP67 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 1 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone XS IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 2 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone XS Max IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 2 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone 11 IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 2 metatra ny halalin'ny 30 minitra
iPhone 11 Pro IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 4 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
iPhone 11 Pro Max IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 4 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
iPhone 12 IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 6 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
iPhone 12 Mini IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 6 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
iPhone 12 Pro IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 6 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
iPhone 12 Pro Max IP68 Fiarovana tanteraka Hatramin'ny 6 metatra ny halaliny mandritra ny 30 minitra
Rehefa mifandray amin'ny rano na rano hafa ny iPhone-nao, ny fihetsika haingana sy tsara dia mety ho ny tsy fitovizan'ny telefaona tapaka sy ny iray mandeha. Ambonin'ny zavatra rehetra, aza matahotra.
Tsy maninona ny fihetsikao haingana, na izany aza, raha tsy fantatrao izay hatao. Ny sasany amin'ireo 'fanamboarana' fahasimban'ny rano malaza indrindra dia manimba bebe kokoa noho ny tsara. Raha heverinao fa simba rano ny iPhone-nao dia apetraho amin'ny faritra fisaka izy ary araho ny dingana etsy ambany.
Alohan'ny hanombohanay dia tianay ny hampitandrina anao amin'ny zavatra iray: Aza manilika na manetsiketsika ny iPhone, satria mety hiteraka rano ao anaty iPhone hidina amin'ireo singa hafa izany ary hiteraka fahasimbana bebe kokoa.
1. Esory ny ivelan'ny iPhone ny ranoka
Raha toa ka misy ny iPhone-nao dia esory izany raha mitazona ny iPhone-nao mitsivalana, ary aseho eo amin'ny gorodona ny efijery. Alaivo an-tsaina hoe misy dobo misy rano ao anatiny (satria mety tena misy izany) ary tsy tianao hivezivezy amin'ny lalana rehetra io pisinina io.
Manaraka izany, ampiasao microfiber na lamba malefaka hafa mifono handraoka ny rano ivelan'ny iPhone-nao. Aza mampiasa tavy, swab landihazo, na zavatra hafa mety hisaraka na hamela vovoka na residue ao anatin'ny iPhone-nao.
2. Esory ny SIM Card
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tadiavinao hatao rehefa tratry ny rano ny iPhone dia ny manala ny karatra SIM -ny. Izany dia tanjona roa sosona amin'ny fanampiana ny famonjena ny karatra SIM tenany sy ny famelana ny rivotra hiditra ao amin'ny iPhone.
Tsy toy ny taloha, ny karatra SIM an'ny iPhone dia tsy misy ny fifandraisanao na ny mombamomba anao manokana. Ny tanjona fotsiny dia ny mampifandray ny iPhone amin'ny tamba-jotra finday. Soa ihany fa matetika ny karatra SIM dia tafavoaka velona, ​​raha tsy hoe mihombo amin'ny rano mandritra ny fotoana maharitra izy ireo.
mametraka iphone amin'ny mode dfu
Raha manana mpankafy ianao dia azonao atao ny manandrana mitsoka rivotra mangatsiatsiaka mivantana any amin'ny seranan-tsambo na ny slot misy ny karatra SIM hampitombo ny fikorianan'ny rivotra. Mametraha toerana malalaka eo anelanelan'ny mpankafy sy ny iPhone. Ny tsio-drivotra malefaka dia mihoatra ny ampy hanampiana ny fizotry ny etona. Aza mampiasa fanamainana famaohana na karazana mpankafy hafa izay mitsoka rivotra mafana.
3. Apetraho eo ambonin'ny velaran-tany fisaka ny iPhoneo eo amin'ny toerana maina
Avy eo, apetraho eo amin'ny lafivalam-pisaka ny tarehinao iPhone, toy ny latabatra an-dakozia na latabatra. Misafidiana toerana misy hamandoana ambany. Aza atao anaty container na kitapo ny iPhone-nao.
Ny fametahana ny iPhone na fametrahana azy ao anaty kitapo misy vary dia azo inoana fa hahatonga ny rano hidina amin'ireo singa anatiny hafa. Mety ho ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy ny fahafatesana ho an'ny iPhone-nao.
4. Mametraha Desiccants eo an-tampon'ny iPhone
Raha manana fidirana amin'ny desiccants ara-barotra ianao, apetraho eo ambonin'ny iPhone sy manodidina azy ireo. Na inona na inona ataonao dia aza mampiasa vary! (Misimisy kokoa momba izany avy eo.) Tsy desiccant mandaitra io.
Inona avy ireo Desiccants?
Ny desiccants dia singa iray izay mamokatra toetran'ny fahamainana amin'ny zavatra hafa. Izy ireo dia hita ao anaty fonosana kely kely izay alefa amina entana toy ny vitamina, elektronika ary akanjo. Amin'ny manaraka mahazo fonosana ianao, vonjeo! Ho mora ampiasaina izy ireo rehefa miatrika olana maika manimba rano.
5. Miandry ny rano ho etona
Raha vantany vao noraisinao ny dingana voalohany hitrandrahana ny iPhone, ny fametrahana azy ary ny fandehanana lavitra matetika no zavatra tsara indrindra azonao atao. Raha misy rano ao anatin'ny iPhone-nao, ny fihenan'ny rano ambonin'ny tany dia hanampy amin'ny fisorohana azy tsy hiparitaka. Ny famindrana ny iPhone dia mety miteraka olana bebe kokoa.
Araka ny holazaintsika avy eo, ny fandinihana ara-tsiansa dia naneho fa ny fampisehoana ireo fitaovana elektronika simba rano dia mety hahomby kokoa noho ny fametahana azy amin'ny vary. Tamin'ny famoahana ny karatra SIM dia namela rivotra bebe kokoa hiditra ao amin'ny iPhoneo izahay, ary izany dia manampy ny fizotry ny etona.
Manoro hevitra anao izahay ny hiandry 24 ora alohan'ny hanandramanao hamerina ny iPhone. Nilaza i Apple fa hiandry adiny dimy farafahakeliny. Arakaraka ny habetsaky ny fotoana no tsara kokoa Tianay ny manome rano ao anaty ny iPhone fotoana ampy hanombohana etona.
6. Andramo ny mamerina ny iPhone-nao
Raha mbola eo amin'ny faritra fisaka ny iPhone-nao dia ampidiro amin'ny heriny izany ary andraso izy hirehitra. Azonao atao ny manandrana mampiasa ny bokotra herinaratra, saingy mety tsy mila izany ianao. Raha niandry ny 24 ora natolotray anay ianao dia inoana fa ho lany bateria io. Rehefa mitranga izany dia tokony hivadika ho azy ny iPhone rehefa afaka minitra vitsy.
7. Avereno alefa ny iPhone-nao, raha vitanao
Raha mirehitra ny iPhone-nao dia avereno avy hatrany amin'ny fampiasana azy iCloud na iTunes . Indraindray dia mety hiparitaka ny fahasimban'ny rano, ary mety hanana varavarankely kely fotsiny ahafahanao mitahiry ny sarinao sy ny angona anao manokana.
8. Dingana fanampiny, miankina amin'ny toe-javatra
Miankina amin'ny toerana hametrahanao ny iPhone-nao, mety misy olana hafa mila fitandremana. Andao isika hijery tranga iray isaky ny tranga:
Narotsako tao anaty trano fidiovana ny iPhone-ko!
Ny fametrahana ny iPhone ao anaty trano fidiovana dia manampy antony iray hafa: bakteria. Ho fanampin'ny fanarahana ireo dingana etsy ambony, dia manolo-kevitra ny hanao fonon-tanana vita amin'ny latabatra ianao rehefa mitantana ny iPhone. Aza adino ny mamono otrikaina ny tananao avy eo!
Fony aho tany Apple, dia tadidiko ny toe-javatra iray nanoloran'ny olona telefaona iray ahy, nitsiky aho, ary nilaza hoe: 'Narotsako tao anaty trano fidiovana io!'
Namaly aho hoe: 'Tsy nieritreritra ny hilaza izany amiko akory ianao talohan'ny nanoloranao ahy ny findainao?' (Tsy izany no teny tokony holazaina amin'ny toe-java-misy amin'ny mpanjifa.)
“Nofafako io!” hoy izy tsy nety.
Raha entinao ao amin'ny Apple Store na fivarotana fanamboarana eo an-toerana ny iPhone-nao rehefa avy mandatsaka izany ao amin'ny trano fidiovana ianao dia azafady mba lazao amin'ilay teknisianina fa 'telefaona fidiovana' io alohan'ny hanoloranao azy ireo azy. Soso-kevitra ny hametraka azy ao anaty kitapo ziplock ho fitaterana aho.
paoma dia manolo-kevitra ny hanasa ny iPhone amin'ny rano fisotroana raha toa ka misy ranoka hafa.
Ny iPhone-nao koa tsy mahazaka sakafo. Izay sombin-tsakafo ao anaty fantsonao dia mety hipetraka ao amin'ny seranan-tsambon'ny iPhone-nao. Raha mahita sombin-tsakafo ao anaty seranan-tsambon'ny iPhoneo ianao dia esory amin'ny alàlan'ny borosy anti-static na borosy nify vaovao.
Narotsako tao anaty koveta fandroana ny iPhone-ko!
Tahaka ny fandatsahana ny iPhone ao anaty labozia, ny fandatsahana azy ao anaty kovetabe fandroana dia mety hiteraka olana amin'ny savony, shampoos, ary vokatra fandroana hafa. Sasao ny faritra rehetra ao amin'ny iPhone izay naseho tamin'ny vokatra fandroana nampiasa rano fisotro.
Raha simba rano ny iPhone-nao dia ametraho ny iPhone misy ny fisehoseho mipetaka amin'ny tany fisaka amin'ny toerana maina. Esory ny karatra SIM. Tazomy izy amin'ny lafiny marindrano, ary aza mihodina na manetsiketsika azy. Raha manana desiccants ara-barotra ianao dia apetraho eo ambonin'ny iPhone-nao. Aza mampiasa vary, satria ny fikarohana siantifika dia naneho fa tsara toy izany koa ny rivotra, raha tsy tsara kokoa. Andraso 24 ora dia avelao ho etona ho azy samirery ny rano vao manandrana mamerina azy indray ianao.
Betsaka ny fanamboarana haingana ao an-trano sy ny 'fanasitranana amin'ny fahagagana' mety hatolotry ny hafa. Na izany aza, mamporisika mafy izahay tsy hihaino angano momba ny fanasitranana fahagagana.
Betsaka ny fotoana, ireo 'fanasitranana' ireo dia mety manimba bebe kokoa noho ny tsara amin'ny iPhone-nao. Amin'ny tranga sasany, ny fanamboarana ao an-trano dia mety hiteraka fahasimbana tsy azo ovaina amin'ny iPhone.
Hevi-diso 1: Ataovy anaty am-bary ny iPhone
Ny angano voalohany tianay hofoanana dia ny 'fanamboarana' fahita indrindra ho an'ireo iPhone simba rano: 'Raha lena ny iPhone-nao dia atsofohy ao anaty gony iray vary izany.' Betsaka ny fiheverana momba an'io olana io, ka nitady fototra ara-tsiansa izahay tamin'ny filazàna fa tsy mandeha ny vary.
Hitanay fandalinana siantifika iray antsoina hoe 'Ny fahombiazan'ny desiccants ara-barotra sy ny vary tsy masaka amin'ny fanesorana ny hamandoana avy amin'ny fitaovam-pandrenesana' izay manome fanazavana momba izany. Mazava ho azy fa ny fitaovam-pandrenesana dia tsy mitovy amin'ny iPhone, fa ny fanontaniana apetrany dia iray ihany: Inona no fomba tsara indrindra hanesorana ny ranoka amin'ny fitaovana elektronika kely simba rano?
Hitan'ny fandinihana fa tsy misy tombony ny fametrahana fitaovam-pandrenesana amin'ny vary fotsy na volontsôkôlà fa tsy apetraka fotsiny eo ambony latabatra foana ary avelao ho maina ny rivotra. Na izany aza, misy ny fatiantoka azo antoka amin'ny fampiasana vary hanandramana maina ny iPhone-nao.
Indraindray dia mety manimba iPhone iray ny vary izay mety ho voavonjy. Ny sombam-bary iray dia mety mora voadona ao anaty «headphone» na seranan-tsambo famahana.
Mitovy habe amin'ny voam-bary tokana ihany ny seranan-jiro. Raha vao tafahitsoka ao anatiny ny iray dia mety ho sarotra be, ary indraindray tsy azo esorina.
Ary noho izany dia tianay ny mazava: Aza atao anaty kitapo vary ny iPhone-nao. Vary fotsy volontsôkôlà tsy maninona. Fanampin'izay, rehefa apetrakao anaty kitapo vary ny iPhone-nao dia nandany ny vary tsara tanteraka ianao!
tsy afaka mamerina voicemail amin'ny iphone
Hevi-diso 2: Apetraho ao amin'ny Freezer ny iPhone
Ny angano faharoa tianay horesahina dia ny hoe tsara ve raha apetrakao ao anaty vata fampangatsiahana ny iPhone simbainao amin'ny rano. Mino izahay fa manandrana mametraka ny iPhone ao anaty vata fampangatsiahana ny olona hisorohana ny rano tsy hiparitaka eraky ny toerana. Saingy, raha vantany vao esorinao hiala ao amin'ny vata fampangatsiahana ny iPhone, dia hitsonika fotsiny ny rano ary hiparitaka eraky ny iPhone ihany.
Rehefa miatrika fahasimban'ny rano iPhone dia tianay ny hamoaka ny rano faran'izay haingana. Ny fametrahana ny iPhone ao anaty vata fampangatsiahana dia mifanohitra amin'izany no izy. Manamontsina ny rano ao anatin'ny iPhone misy anao izany, mamandrika azy ary manakana azy tsy hitsoaka.
Ny rano dia iray amin'ireo ranoka miitatra rehefa manakaiky ny hatsiaka. Midika izany fa ny hatsiaka ny iPhone dia hampitombo ny habetsaky ny rano voafandrika ao anatiny, ary mety hampifandray azy amin'ireo singa tsy simba teo aloha.
Mbola misy antony iray hafa mety tsy tokony hametrahanao ny iPhone ao anaty vata fampangatsiahana. iPhones dia manana mari-pana miasa mahazatra eo anelanelan'ny 32-95 ° F. Ny mari-pana tsy iasan'izy ireo dia midina ambany ihany amin'ny -4 ° F, noho izany dia tsy azo antoka ny mametraka azy amin'ny tontolo mangatsiaka kokoa noho izany.
Miasa amin'ny 0 ° F ny vata fampangatsiahana mahazatra, saingy azo atao mangatsiaka kokoa izy ireo indraindray. Raha apetrakao ao anaty vata fampangatsiahana ny iPhone -5 ° F na mangatsiaka kokoa, dia mety hiteraka fahavoazana fanampiny amin'ny iPhone ianao.
Hevi-diso 3: Atsofohy ny iPhone, na apetaho amin'ny lafaoro! Manama ny volonao, tsy tokony ho maina ny iPhone-nao?
Aza manandrana mitsoka ny rano amin'ny iPhone-nao. Ny fampiasana fanamainana fanamainana dia mety hampitombo ny olana!
Ny fanamainana mitsoka dia hanosika ny rano hidina ao amin'ny iPhone-nao. Izany dia hampiharihary amin'ny rano bebe kokoa ny iPhoneo, izay mifanohitra amin'izay tiantsika hitranga.
Raha mieritreritra ny hametraka ny iPhone ao anaty lafaoro ianao hanandrana hanafoana ny rano amin'ny hafanana, dia tsy hanome sosokevitra izany koa izahay. Raha ny filazan'ny Apple manokana, ny iPhone XS dia manana mari-pana miasa hatramin'ny 95 ° F (35 ° C) ary ny mari-pana tsy miasa hatramin'ny 113 ° F (45 ° C).
Raha manana lafaoro iray mahamay hatramin'ny 110 ° F ianao, dia andramo! Nanamarina aho, ary indrisy, ny maripana ambany indrindra amin'ny ahy dia 170 ° F.
Na dia mety mahazaka hafanana marobe kokoa aza ny sasany amin'ireo fitaovana elektrika mora tohina ao anaty ny iPhone, ny efijery, bateria, tombo-kase tsy misy rano ary ireo singa hafa dia tsy mahatohitra hafanana.
Hevi-diso 4: Ampiasao ny alikaola Isopropyl hanamaina ny iPhone
Ny alikaola Isopropyl dia vahaolana an-trano tsy dia be mpampiasa loatra amin'ny fanamboarana ny simba amin'ny rano iPhone. Misy ahiahy telo lehibe rehefa mametraka ny iPhone amin'ny alikaola isopropyl.
Voalohany, ny alikaola dia mety hampihena ny firakotra oleophobic amin'ny fisehoan'ny iPhone. Ny firakotra oleophobic no mahatonga anao tsy mahazaka dian-tànana. Azonao atao ny manala baraka ny kalitaon'ny fampiratiana amin'ny alàlan'ny fametrahana alikaola ny iPhone.
Faharoa, ny alikaola isopropyl dia soloina ranon-javatra hafa. Matetika dia rano. Amin'ny fampisehoana ny iPhone amin'ny alikaola isopropyl dia mampiharihary azy io mihintsy koa ianao.
Fahatelo, ny alikaola isopropyl dia solvent polar. Midika izany fa mitarika be dia be. Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny fahasimban'ny rano dia ny famoronana fiampangana herinaratra amin'ny toerana tsy tokony hatao.
Tsy maintsy esorinao ny zava-drehetra amin'ny batterin'ny iPhone alohan'ny handinihanao ny alikaola isopropyl. Ny famoahana iPhone dia asa sarotra, mitaky fitaovana manokana ary afaka manafoana tanteraka ny fiantohana anao.
Noho ireo antony ireo dia manoro hevitra mafy izahay ny amin'ny tsy fanandramana manamboatra ny iPhone simba-rano amin'ny alikaola isopropyl.
Raha nandray ny dingana etsy ambony ianao ary mbola manana olana dia tonga ny fotoana handraisana fanapahan-kevitra momba ny fomba hirosoana. Misy safidy maro, manomboka amin'ny fividianana telefaona vaovao ka hatramin'ny fanamboarana singa iray. Ny tanjonay dia ny hanome anao ny fampahalalana ilainao handraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra ho anao sy ny iPhone simba-drano.
Indraindray dia afaka, ary indraindray tsy afaka. Tsy azo vinavina ny fahasimban'ny rano. Hampitombo ny fahafahanao hanavotra ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana izay atolotray etsy ambony, fa tsy misy antoka.
Aza hadino fa tsy eo noho eo foana ny vokatry ny fahasimban'ny rano. Rehefa mifindra monina ao anaty iPhone ny ranoka dia mety hijanona tampoka ny singa efa niasa. Mety andro na herinandro maromaro vao manomboka miseho ny olana.
Fiheverana voalohany: Manana AppleCare + na fiantohana ve ianao?
Raha manana AppleCare + na fiantohana amin'ny alàlan'ny mpitatitra tsy misy tariby ianao dia manomboka eo. AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, ary ireo mpitatitra hafa dia manolotra karazana fiantohana. Tsy maintsy mandoa deductible ianao, saingy matetika dia kely lavitra noho ny vidin'ny iPhone vaovao ny vidiny.
Na izany aza, raha manana telefaona antitra ianao ary mitady antony hanatsarana azy dia mety izao no fotoana mety indrindra. Ny azo alaina ho an'ny mpitatitra sasany dia tena be lavitra noho ny paosy noho ny famatsiam-bola iPhone vaovao miaraka amin'ny fandoavam-bola isam-bolana.
Momba ny AppleCare +
AppleCare + dia mandrakotra 'tranga' roa misy simba amin'ny rano na loza hafa, miaraka amin'ny sarany 99 $. Raha tsy manana AppleCare + ianao, dia mety ho lafo be ny fanamboarana tsy misy antoka ho an'ny fahasimban'ny rano.
Apple dia tsy manamboatra singa tsirairay amin'ny iPhones simba-drano - manolo ny telefaona iray manontolo izy ireo. Na dia toa misavorovoro aza ity dia misy dikany ny antony nanaovan'izy ireo izany.
Na dia azo amboarina aza ny ampahany iray indraindray, dia sarotra ny manimba ny rano ary mety hiteraka olana eny an-dàlana rehefa miparitaka eraky ny iPhone ny rano.
Raha ny fomba fijerin'i Apple dia tsy ho azo atao ny manolotra garantie amin'ny iPhone izay mety hotapahina tsy misy fampandrenesana. Mbola handoa vola kely kokoa ianao hanoloana iPhone amin'ny alàlan'ny AppleCare + raha mandoa ny azo alaina.
Izany dia nilaza, ary indrindra nomena ny vidin'ny fanamboarana tsy misy fiantohana amin'ny alàlan'ny Apple, ny serivisy ankolafy na fivarotana fanamboarana izay manamboatra ny ampahany tsirairay no mety ho anao indrindra. Fantaro fotsiny fa ny fanoloana izay singa ao amin'ny iPhone misy ampahany tsy Apple dia hanafoana tanteraka ny fiantohana anao.
Ny vidin'ny fanamboarana fahasimban'ny rano Apple
Warranty ivelan'ny famoahana
Miaraka amin'ny AppleCare +
IPhone 6 $ 299,00 $ 99.00
iPhone 5, 5s, ary 5c $ 269.00 $ 99.00
iPhone 3G sy 3GS $ 149.00 $ 99.00
Momba ny fiantohana amin'ny mpitatitra
AT&T, Sprint, T-Mobile, ary Verizon dia mampiasa orinasa antsoina hoe Asurion hanomezana fiantohana finday ho an'ny mpanjifa. Ny drafitra fiantohana telefaona Asurion dia manarona fahasimban'ny rano. Aorian'ny fametrahana fitakiana dia matetika i Asurion no manolo ireo fitaovana simba ao anatin'ny 24 ora, raha toa ka rakotra fiantohana izany.
Ireto misy rohy mahasoa raha manana fiantohana mpitatitra ianao ary te-hitaky fangatahana fahasimban'ny rano:
Fampahalalana momba ny vidiny
AT&T Mametraha fangatahana fiantohana Vidiny fanoloana finday
T-Mobile Mametraha fangatahana fiantohana - Sarany fanoloana finday fiarovana
- Vidin'ny fanovana telefaona finday fototra
- Fiarovana amin'ny finday Premium (Prepaid) ny vidin'ny fanoloana finday
Verizon Mametraha fitarainana Vidiny fanoloana finday
Rehefa mampitahanao ny vidin'ny telefaona vaovao amin'ny vidin'ny fanoloana ampahany iray ianao dia indraindray manolo ny ampahany tokana no lalana tokony haleha. Fa indraindray tsy izany.
Raha tsara endrika ny ambin'ny iPhone-nao ary vaovao ihany ny telefaoninao, dia mety ny fanamboarana no filanao tsara indrindra, indrindra raha toa ka mpandahateny na faritra hafa lafo vidy kokoa ilay faritra simba rano.
Ny fanoloana ny iPhone iray manontolo dia mety ho ny hetsika mety raha toa ka singa mihoatra ny iray no tapaka na tsy hivadika mihitsy izany. Ho kely ny aretin'andoha ary mety ho mora vidy kokoa noho ny fanolo ny faritra tapaka maro.
Isaky ny mividy telefaona vaovao ianao dia manana fotoana lehibe itahirizana vola. Hatramin'izao dia betsaka ny olona no nijanona tamin'ny toerana misy azy hatrany, satria mandreraka sy mandany fotoana ny fampitahana ny vidiny amin'ny mpitatitra.
Namorona UpPhone izahay hamahana izany olana izany. Ny tranonkalantsika dia manana motera fikarohana izay manamora azy ampitahao ny telefaona finday rehetra ary ny drafitra finday rehetra any Etazonia, mifanila.
Na dia faly amin'ny mpitatitra anao ankehitriny aza ianao, dia mety hojerena haingana ny drafitra vaovao natolony. Nihena ny vidiny satria nitombo ny fifaninanana, ary tsy ampahafantarin'ireo mpitatitra ny mpanjifany ankehitriny rehefa afaka manangom-bola izy ireo.
Serivisy fanamboarana on-demand
Orinasa takiana, 'tonga aminao izahay' orinasa fanamboarana antoko fahatelo dia safidy lehibe raha toa ka nazeranao anaty rano fotsiny ny iPhone-nao. Maro amin'ireo serivisy fanamboarana ireo no afaka mandefa olona aminao ao anatin'ny adiny iray latsaka.
hanin-kotrana dia iray amin'ireo serivisy fanamboarana ny fangatahana ankafizinay indrindra. Afaka mandefa teknisiana voamarina mivantana eo am-baravarana ao anatin'ny enim-polo minitra izy ireo ary manolotra fiantohana mandritra ny androm-piainany amin'ny serivisy rehetra.
Fivarotana fanamboarana eo an-toerana
Ny fivarotana fanamboarana iPhone 'reny sy pop' eo an-toerana dia fomba iray hafa hahazoana fanampiana eo noho eo raha toa ka mandatsaka ny iPhone ao anaty rano ianao. Ny olana dia tsy ho be atao toa ny Apple Store izy io, ary mazàna tsy mila manao fotoana.
Na izany aza, mamporisika anao izahay hanao antso alohan'ny hidiranao ao amin'ny magazay. Tsy ny magazay fanamboarana rehetra no manamboatra iPhones simba-drano, ary indraindray ny fivarotana eo an-toerana dia tsy manana ampahany amin'ny tahiry. Raha mamporisika ny fanamboarana faritra maro amin'ny iPhone ny fivarotana fanamboarana eo an-toerana dia azonao atao ny mieritreritra ny hividy telefaona vaovao.
Azonao atao ny misoroka ny serivisy mailaka raha mieritreritra ianao fa misy fahasimban'ny rano ny iPhone. Ny fandefasana ny iPhone-nao dia afaka manetsiketsika azy manodidina ary mampitombo ny mety fiparitahan'ny rano manerana ny iPhone-nao.
Na izany aza, raha maina ny iPhone-nao ary tsy miverina amin'ny laoniny, ny serivisy fanamboarana mailaka matetika dia manana fotoana fihodinana mandritra ny andro vitsivitsy ary mety ho kely noho ny safidy hafa.
Azoko atao ve ny manamboatra iPhone manimba rano amin'ny tenako?
Tsy mamporisika anao izahay manandrana manamboatra iPhone simba-drano samirery, indrindra raha mbola tsy nanao an'io ianao. Mety ho sarotra ny hahafantatra hoe inona amin'ireo ampahany amin'ny iPhone no mila soloina. Mety ho sarotra kokoa noho izany ny mahita ireo faritra fanoloana kalitao avo lenta.
Ny famoahana ny iPhone dia mitaky fitaovana manokana. Raha toa ianao ka karazana adventurous dia afaka mividy an Kitapo fanamboarana iPhone amin'ny Amazon tsy latsaky ny $ 10.
Afaka mivarotra iPhone simba-drano ve aho?
Ny orinasa sasany dia hividy iPhones simba-drano avy aminao mba hanodinana azy ireo soa aman-tsara na hamonjy ireo ampahany mbola miasa. Mety tsy hahazo be ianao, fa tsara kokoa noho ny tsy misy, ary io vola io dia azo apetraka amin'ny fividianana telefaona vaovao.
Zahao ny lahatsoratray raha mila fampitahana ireo toerana azonao atao amidio ny iPhone-nao .
Raha hamintina ny momba ireo safidinao fanamboarana
Araka ny efa nolazainay teo aloha, indraindray ny safidy tsara indrindra dia ny havaozina ho iPhone vaovao , indrindra raha handaniam-bola be ny telefaoninao ankehitriny. Ny iPhone rehetra hatramin'ny iPhone 7, ary Android maro hafa, toa ny Google Pixel 3 sy Samsung Galaxy S9, dia mahatohitra rano.
Anjaranao ihany ny safidy. Atombohy amin'ny famotopotorana ny fiantohana fiantohana anao, ary avy eo miroso amin'ny fanamboarana ny vidiny. Fantatray fa handray fanapahan-kevitra tsara ianao.
Tianay ny maheno ny zavatra niainanao tamin'ny fanimbana ranon-javatra iPhone ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany. Efa nanandrana fanamboarana fanimbana ranon-javatra hafa ve ianao? Raha nanapa-kevitra ny hahazo telefaona vaovao ianao, iza amin'ireo no notsongainao? Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manontany azy ireo any, ary hiezaka mafy izahay hiverina aminao.